Iza no arahinao?
Jolay 2, 2019 sklindsey
Iza no arahinao? Taorian'ny niverenan'i Jesôsy an'i Piera hitaky ny hamahana ny ondriny, dia nambarany tamin'i Petera izay hitranga amin'ny ho avy. Natolotr'i Jesosy ny ainy, ary koa i Petera [...]
Tsy andriamanitra vitsy isika, ary Andriamanitra tsy hery tsy fantatra.
Jolay 3, 2017 sklindsey
Tsy andriamanitra kely isika, ary Andriamanitra tsy hery tsy fantatra. Hoy i Jesosy tamin'i Filipo mpianany: "Minoa ahy fa Izaho dia ao amin'ny Ray ary ny Ray ato amiko, na raha tsy izany dia minoa Ahy [...]
Jesosy no Lalana…
Aprily 13, 2017 sklindsey
Jesosy no Lalana… Fotoana fohy talohan'ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana dia nilaza tamin'ny mpianany i Jesosy hoe: “'Aza malahelo ny fonareo; mino an'Andriamanitra ianao, minoa Ahy koa. Ao an-tranon'ny Raiko misy fitoerana maro; raha [...]